Ny UNWTO dia an'ny Sekretera jeneraly: Very in Translation?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny UNWTO dia an'ny Sekretera jeneraly: Very in Translation?
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Kenya Breaking News • Vaovao farany momba an'i Maraoka • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Marrakesh, Madrid, na Nairobi - izany no fanontaniana. “Ampahafantaro anao raha vao misy setroka fotsy”, hoy ny fanehoan-kevitry ny eTurboNews avy amin'ny mpitondra tenin'ny minisitra malaza iray nandray anjara tamin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fanovana toerana hanaovana ny fivoriamben'ny UNWTO ho avy.
Telo andro lasa izay, nanambara ny sekretera jeneralin'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany ny fiovan'ny toerana hanaovana ny 24 ho avy.th Fivorian'ny Fihaonambe, hatao any Marrakesh, ny 30 Novambra - 3 Desambra 2021
Ny Sekretaria, rehefa avy nifampidinika tamin'ny Filohan'ny Filankevitra Mpanatanteraka sy ny Governemanta Espaina dia nampahafantatra ireo Firenena mpikambana fa ny toerana vaovao dia ho any Madrid, amin'ny daty mitovy.
Najib Balala, sekreteran'ny fizahantany ho an'i Kenya omaly dia nanasa ny UNWTO hanao ny fivoriambe 2021 any Kenya.
Ny Fivoriamben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany (UNWTO) manaraka dia mety ho fivoriana manan-danja indrindra amin'ity masoivoho mikambana amin'ny Firenena Mikambana ity.
Marrakesh, Madrid na Nairobi, ary oviana?
Mbola hatao ny 30 novambra ve ny fivoriambe sa any aoriana any ?
Hotanterahina any Maraoka ve ny fivoriambe any aoriana any sa amin’ny 30 Novambra any Espaina na any Kenya?
Ny fiteny ampiasaina amin'ny taratasy Maraokana ho an'ny Sekretariat UNWTO tamin'ny 15 Oktobra dia frantsay. Toa very tamin'ny fandikan-teny ny ampahany amin'ity taratasy ity.
Ny famakiana ity seraseran'ny Governemanta Maraoka ity dia tokony hanontany tena raha tena fangatahana fanovana toerana tsotsotra avy any Marrakesh ho any Madrid ny vokatr'izany?
Global dia midika hoe eran-tany, ary tsy miova ny toe-draharaha maneran-tany COVID-19 raha jerena avy any Maraoka na amin'ny fomba fijerin'i Espaina.
Saingy misy teboka iray tena manjavozavo izay manome fahatsapana fa ny Sekretariat, noho ny antony iray dia mora noeritreretina, na ninia nanodikodina ny fifandraisana nataon'ny Governemanta Maraokana.
Raha toa ka napetraka tao amin'ity serasera ity ny famaritana ny fotoana na ny toerana na ny roa tonta dia mety ho marina ny governemanta Maraokana nangataka fanovana toerana.
Na izany aza, amin'ny tenany manokana, ny taratasy nalefan'ny Governemantan'i Maraoka dia mety tsy natao hangataka ny fifindran'ny firenena, fa fangatahana tsotra hanemorana ny fivoriambe nosoratana tamin'ny fe-potoana ara-diplaomatika frantsay.
Raha ny zava-misy dia sarotra ny mino fa amin'izao toe-draharaha maneran-tany amin'ny areti-mifindra izao dia mety hisy fiovana raha toa i Madrid na i Marrakesh avy amin'ny lafiny fiarovana sy fiarovana.
Teo anelanelan'ny 18 sy 22 oktobra, Espaina dia nanoratra tranga vaovao 13,346, izany hoe 57.13 isan-jato isan'andro, raha tamin'io vanim-potoana io ihany, tany Maraoka dia 1,350 ny tranga vaovao, izany hoe 7.49 isan-jato isan'andro, izay avo valo heny. .
Ny Comunidad de Madrid dia mamoaka tatitra isan-kerinandro momba ny areti-mifindra. Ity farany dia manondro ny herinandro 11-15 oktobra ary misoratra anarana isan'andro amin'ny tranga vaovao 44.4 isaky ny tapitrisa. Ny herinandro manaraka dia tsy mbola navoaka, fa ny angon-drakitra manerantany any Espaina dia nitombo 13%.
Any Maraoka, ambany kokoa ny angon-drakitra Marrakesh eo an-toerana, amin'ny filaharan'ny vondrona vitsivitsy isaky ny tapitrisa.
ao amin'ny eTurboNews lahatsoratra omaly, noheverina fa ny fanovana toerana dia hetsika iray hafa ataon'ny Sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao, izay ny fampielezan-kevitry ny fifidianana dia niteraka korontana mihoatra ny iray teo amin'ireo olona zatra ny etika UN.
Ny Fihaonambe no toerana hamehezana ny fanamafisana ny vato nomen'ny Filankevitra Mpanatanteraka UNWTO hifidianana ny SG ankehitriny mandritra ny 2 taona vaovao.
Raha misy solontena ao amin'ny Antenimieram-pirenena ireo firenena mpikambana ao amin'ny masoivohony any Madrid na raha maro ny tsy fisehoana, ny famakafakana ny eTurboNews mety ho marina ny lahatsoratra.
Tsy voatery ho izany anefa. Amin'ny teny espaniola, fehezanteny ampiasaina matetika dia “Le salió el tiro por la culata” angamba maneho hevitra kokoa noho ilay dikanteny anglisy hoe “mihemotra ny tifitra”.
Nosakanan'i Maraoka vao haingana ireo sidina avy any amin'ny firenena maro. Tsy izany no mitranga any Espaina. Espaina dia iray amin'ireo firenena eoropeana vitsy izay mamela ny fidirana tsy misy confinement ho an'ireo izay vita vaksiny tanteraka.
Na mety hiteraka fanehoan-kevitra avy amin'ireo firenena izay nesorina tamin'ny hetsika fitsangatsanganana mahery vaika nataon'ny Sekretera jeneraly amin'izao fotoana izao nandritra ny taona talohan'ny fifidianana ny Birao Mpanatanteraka dia tsy azo antoka fa mety. Hisy fiantraikany amin'ny ankamaroan'ny fahafahan'ny firenena Arabo, Afrikana ary Amerika Latina kely izany.
Mety mahaliana ny mamakafaka ny fizotran'ny fanovana toerana.
Ny fanehoan-kevitra voalohany dia momba ny fotoana: Tamin'ny Novambra 2020 Banky Iraisam-pirenena FMI sy ny Governemanta Maraoka dia nanapa-kevitra ny hanemotra ny fivoriana isan-taona FMI mandritra ny herintaona. Voalahatra amin'ny Oktobra 2022 any Marrakesh izany.
Tamin'ny fotoan'ny fiovana, ny tranga COVID isan'andro any Maraoka sy Espaina dia avo folo heny noho ny ankehitriny. Tsy nampiahiahy ny UNWTO izany.
Nandritra io vanim-potoana io dia nifantoka tamin'ny zavatra noheverin'ny olona maro mampiahiahy ny fandaharam-potoanan'ny Sekretera jeneraly. Nivory ny Filankevitra mpanatanteraka nandritra ny fihanaky ny COVID-19 sy ny lozam-pifamoivoizana. Tsy nanam-potoana nametrahana antontan-taratasy ara-dalàna ireo kandidà vonona hihantsy an'i Zurab ka taitra.
Solontenan'ny masoivoho sasany ny solontena avy amin'ny filankevi-panatanjahantena nanala an'i Zurab fanindroany, saingy zara raha misy kandida marina (Minisitry).
Ny faharoa dia teboka ara-teknika.
Ny fanambaran'ny Sekretariat UNWTO dia milaza fa ny fampahalalana momba ny toerana vaovao ho an'ny GA dia "Mifanaraka amin'ny fahefana nomena eo ambanin'ny Torolàlana momba ny fifantenana ny toerana hanaovana ny fivoriamben'ny Fihaonambe nankatoavin'ny Fihaonambe tamin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitra 631 (XX)" .
Raha mijery ny lahatsoratry ny fanapahan-kevitra 631(XX) isika, hita ao amin'ny tranonkala dia tsy misy ny fiheverana ny delegasiona toy izany. Angamba ny Sekretariat dia mety nanondro ny andininy faha-8.2 amin'ny sata, na dia nosoloina andalana I.7 aza.
Tsy maintsy mihamatanjaka ny Firenena Mikambana, ary tokony hapetraka ny lalana tsara kokoa ho an'ny fitarainana.
Ny fanakianan'ny OMS, ny tsy fahafahan'ny WTO mamaly ny fangatahan'i India sy Afrika Atsimo mba hanafahana ny patanty vaksiny mandritra ny areti-mifindra, dia fandrahonana tanjona.
Ny fizahantany dia iray amin'ireo loharanon-karena ara-toekarena lehibe ho an'ny firenena maro, indrindra ireo firenena an-dalam-pandrosoana. Mendrika ny fitantanana ny Fikambanana ONU ao amin'ny fanapahan-kevitra azo takarina kokoa sy manaja ny fitsipika, fa tsy hoe mangarahara.
Raha jerena ny fiheverana toy izany, dia tsy mahagaga raha mandray sy midera izao tontolo izao ny fanambarana malala-tanana avy hatrany nataon’i Kenya hampiantrano ny fivoriambe amin’ny volana ho avy.
Kenya dia manana ny iray amin'ireo tranga COVID-19 ambany indrindra, 1.73 isaky ny tapitrisa tao anatin'ny valo andro farany, ary mampiantrano roa amin'ireo masoivoho ONU manan-danja indrindra, ary, farany, fa tsy ny kely indrindra, ny fitsipiky ny fihodinana ara-jeografika dia hohajaina.
Tsy an’ny Sekretera jeneraly ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany. Tsy anjarany ny manaiky, mandà na tsy miraharaha ny fangatahana toy izany avy amin'i Kenya
Tsy maintsy manaraka amin'ny fomba maika ny toe-draharaha mitaky ny fomba izay nambaran'ny Sekretera fa narahan'izy ireo tamin'ny fifandraisana tamin'ny herinandro lasa, izay voafaritry ny fanapahan-kevitra voalaza teo aloha.
Noho izany, manantena aho fa hampahafantatra avy hatrany an'i Kenya ny UNWTO ny fepetra ahafahan'i Nairobi ho mpampiantrano ny fivoriambe manaraka.